Football Khabar » बार्सिलोनाको ‘तुफानी आक्रमण लाइन’ तयार !
बार्सिलोनाको ‘तुफानी आक्रमण लाइन’ तयार !
स्पेनिस बार्सलोनाका कप्तान लिओनल मेस्सीले यो सिजन अझैसम्म खेल्न पाएका छैनन् । प्रि–सिजनक्रममा प्रशिक्षण क्याम्पमा फर्किएकै दिन चोट बोकेका उनी अझैसमम टोलबाहिर छन् । उनीबिना बार्सिलोनाले घरेलु लिगमा कमजोर सुरुआत गरेको छ ।
तर, अब कप्तान मेस्सीसँगै बार्सिलोनाको पहिलो रोजाइको आक्रमण सेट तयार भएको छ । मेस्सी र लुइस स्वारेज एकसाथ चोटमुक्त हुँदै मैदान फर्किने तयारीमा छन् । उनीहरू अहिले प्रशिक्षणमा व्यस्त छन् । बार्सिलोनाले यसै समरमा अनुबन्ध गरेका फ्रेन्च स्टार एन्टोनी ग्रीजम्यान नयाँ सिजनको सुरुआतबाटै टोलीमा उपलब्ध छन् ।
आगामी सेप्टेम्बर १४ मा बार्सिलोनाले ला लिगको चौथो खेल आफ्नो घरमा भ्यालेन्सियासँग खेल्दैछ । सोही खेलमा बार्सिलोनाका ३ जनै स्टार खेलाडीहरू एकसाथ सुरुआती टोलीमा मैदाने उत्रिने तय भएको छ । भ्यालेन्सियाविरुद्ध खेल्दा मेस्सीको नयाँ सिजनको पहिलो खेल हुनेछ भने स्वारेजको कमब्याक हुनेछ । उनीहरू ३ जनैका लागि सो खेल सँगै खेलेको पहिलो खेल हुनेछ । र, ग्रीजम्यानका लागि मेस्सीसँग एकै जर्सीमा खेलेको पहिलो खेल पनि हुनेछ ।
स्पेनिस मिडियाका अनुसार बलियो टोली भ्यालेन्सियाविरुद्ध क्याम्प नोउमा उत्रिँदा प्रशिक्षक अर्नेस्टो भाल्भर्डेले पहिलो रोजाइका ३ जनै स्टार फरवार्डलाई पहिलोपटक एकसाथ उतार्ने तयार गरेका छन् । स्वारेजले यस सिजन ला लिगामा एक खेल खेलेका छन् भने ग्रीजम्यानले ३ वटै खेल खेल्दै २ गोल गरेर १ गोलका लागि असिस्ट गरेका छन् ।
प्रकाशित मिति २२ भाद्र २०७६, आईतवार ०५:५३